Google Poly, iyo 3D chinhu chikuva chichavhara muna Chikumi 2021 | Linux Vakapindwa muropa
Makuva eGoogle ari kuwedzera zvakawedzera uye ndizvozvo munguva pfupi yapfuura Google yakavhurwa kuburikidza neemail uyo anoronga kuvhara chikuva chake uye 3D raibhurari yekugadzira zvinhu, Poly, gore rinouya, kuve yazvino yekambani yakawedzera chokwadi / chaiyo mapurojekiti ekusiya.
Iyo kambani inopa zano vashandisi kurodha raibhurari yavo vasati vasiya zvachose maseva.
Kune avo vasingazive nezvePoly, iwe unofanirwa kuziva kuti ichi chishandiso chakanangana nekugadzira zvinhu zvitatu-zvemhando zvinogona kushandiswa kwechokwadi chaicho kana mitambo inorira uchishandisa tekinoroji ye3D.
Kuvharwa kwakarongwa kuchaitika muna Chikumi 30, 2021. Izvi zvinopa vashandisi nguva yakawanda yekukwirisa basa ravo uye kurodha pasi zvigadzirwa zvese kukomputa yavo yemuno.
"Mushure maJune 30, poly.google.com uye maAPIs anosangana nazvo haachakwanisike kuwanikwa. Hauchakwanise kudhawunirodha mhando nyowani dze3D pa poly.google.com mushure maApril 30, 2021 ", tinogona kuverenga mune chirevo.
“Tinotenda kuti unovimba nesu kuti tigamuchire zvigadzirwa zvako uye nekupa nzvimbo yavanogona kupenya. Takashamiswa uye takafadzwa nebasa risingadaviriki ratakatumirwa nevashandisi vedu paPoly mazuva ese, uye tinofanirwa kuti titende nazvo, ”email yacho yakazoverengwa gare gare.
Kana chiri chikonzero nei Google ichiita sarudzo yakadaro, haina kuziviswa, chete yakati chiyero ichi chikamu chehurongwa hwekufambisa zviwanikwa uye chengetedza mari yakawanda mukubatsira kwechokwadi zviitiko zvakawedzera seGoogle Lens, kutsvaga nzira paGoogle Mepu app, uye nekufambiswa kwekufambisa paGoogle Tsvaga.
Iyi sarudzo ichaenderera ichikanganisa vashandisi avo vanonyanya kuvimba pachikuva, kunyanya kugadzirwa kwemitambo yeakawedzera chaiwo tekinoroji uye chaiyo chaiyo.
Google's Poly 3D yaiitirwa chaiwo vagadziri sechishandiso chiri nyore kukwidziridza zvirimo uye mashandiro echokwadi mitambo. Ichi chishandiso ndechimwe chemhando, sezvo chiri chimwe chezvishoma zvishandiso zviripo pamusika wakatsaurirwa kugadzira "low-poly" zvinhu zvine chaiwo Google akawedzera chaiwo maturusi.
Iyo 3D webhusaiti webhusaiti yakagadzirwa kuti ipe rubatsiro uye zororo kubva kune yakanyanya kutsvakwa-chaiyo chaiyo uye yakawedzera chaiyo tekinoroji nhasi. Kuwedzera kwechokwadi uye chaicho chaicho ndiwo maviri epasirese akasarudzika matanho ekugadzirwa kwemitambo yanhasi, mharidzo, maindasitiri, uye nzvimbo.
Pakutanga yakagadzirirwa seye 3D yekugadzira chishandiso uye raibhurari yakagadzirirwa chaiyo chaiyo, Poly yaibvumidza vashandisi kugadzira uye kuona 3D zvinhu yakadzika polygon, iyo inogona kutorwa pasi kuti ishandiswe mumifananidzo uye mashandisirwo.
Poly yaive chikamu chakakosha chenyika inonyudza payakatanga kuburitswa, ichisimudzira nhaka yakavhurika yekugadzira nekugadzirisa zvakare zvirimo zve 3D.
Ipuratifomu yeGoogle ndeye mahara uye kunyangwe mhedzisiro yakaiswa uye yakagadzirwa nevanyori vayo inowanikwa kuruzhinji. Iyo Creative Commons rezinesi repuratifomu inobvumidza mukana uyu, chero bedzi musiki akagamuchirwa nemutemo uye achizivikanwa.
Poly 3D ndeimwe yezvirongwa zveGoogle zviripo zveAR uye zveVR zvinowanikwa kune veruzhinji. Iyo kambani yakavhara akawanda emidziyo iyi mumakore achangopfuura uye Poly ari kutevera maitiro. Chipuratifomu chaPoly chakanangana nemitambo uye ruzivo kupfuura Adobe's Tilt Brush uye Medium, inova inyanzvi.
1 / Kana uchangobva kugamuchira iyi email, ziva kuti ako e3D mhando anogamuchirwa pa @Sketchfab! pic.twitter.com/ZhF1Pn2Xuv
- alban denoyel (@albn) December 2, 2020
Takatarisana neiyi nhau yekuvharwa, Sketchfab CEO Alban Denoyel, Ini ndinokoka vashandisi vePoly kusevhisi yako. Chirongwa cheGoogle chinoita kuti zvikwanisike kushambadzira kambani yeSketchfab, yakavambwa muna2012 naAlban Denoyel, sezvo Sketchfab yaive pamberi peGoogle uye ichipa sevhisi yakafanana.
Iyo kambani inokoka vese vasara veGoogle Poly vashandisi vachiri kubatsirika kubva kune itsva wave yePhones uye iPads inokwanisa kutora uye kugovana 3D zvemukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Poly, iyo 3D chinhu chikuva ichavhara muna Chikumi 2021